I-Rockville Cottage - 24376 (24376)
Bempton, near Flamborough, United Kingdom
UCottages,Com unezimvo eziyi-2181 zezinye iindawo.
Indawo ye-RSPB e-Bempton Cliffs ikumgama nje oziikhilomitha ezi-1½, apho unokujonga khona ukuya e-Flamborough Head.
Igumbi lokuhlala / lokutyela: Ngesitshisi seenkuni, iTV yeFreeview, iDVD player enokukhetha iiDVD kunye nemiqadi.
Ikhitshi: Nento yokupheka yombane, imicrowave, ifriji/isikhenkcisi, umatshini wokuhlamba izitya, iwasha/isomisi kunye nomgangatho ofakwe iithayile.
Igumbi lokulala 1: Ngebhedi enkulu, imiqadi kunye nesilingi ethambekileyo.
Igumbi lokulala 2: Ngeebhedi ezingamawele, imiqadi, isilingi ethambekileyo.
Igumbi lokuhlambela: Ngeshawari phezu kwebhafu, kunye nendlu yangasese .. Ukufudumeza okuphakathi kwerhasi, igesi, umbane, ilinen yebhedi, iitawuli kunye neWi-Fi ebandakanyiweyo. Ibhedi yokuhamba kunye nesitulo esikhulu. Igumbi lemidlalo elinetafile yepool (ekwabelwana ngayo).. Indawo yokuhlala enendlu yasehlotyeni, iveranda kunye nefenitshala yegadi. IPaddock kunye namabala anepatio, ifenitshala yegadi, i-BBQ kunye nendlu yasehlotyeni (ekwabelwana ngayo nezinye iipropathi ezikwisiza). Indawo yokupaka yabucala yeemoto ezi-2. Akutshaywa. Nceda uqaphele: Kukho ichibi elibiyelweyo emabaleni, kumgama oziimitha ezingama-50. Ngaphezu kweminyaka engama-200 ubudala, ezi zakhiwo zazifudula zifama zixinene kwimbali, kwaye zazikhe zaba likhaya lamabanjwa emfazwe aseJamani ngexesha leMfazwe Yehlabathi ll, iCopper House iyikhaya labo. indawo yokuhlala engundoqo. Iguqulwe ngothando kwaye yakhiwe kufutshane nekhaya lomnini, ineehektare ezili-10 zepaddock enengca kunye neendawo zokuhamba zendalo apho iindwendwe zinokujonga izikhova kunye neebheji kwaye zonwabele intabalala yezilwanyana zasendle kunye nemibono yasemaphandleni, ngelixa abantwana benendawo eninzi yokudlala. Le ndawo ifanelekileyo yeholide inento yalo lonke usapho, kwaye inendawo ebiyelweyo enamahashe.Indawo efanelekileyo yeholide yokuhlola i-East Yorkshire Coast kunye neemayile zolwandle oluphumelele ibhaso, zonke ngaphakathi kweemayile ezi-5. Indawo engcwele ye-RSPB eBempton Cliffs, ikumgama oziikhilomitha ezi-1.5, apho unokujonga khona imbonakalo ephezulu ukuya kwiFlamborough Head ngelixa ubona iintlobo ezininzi zeentaka ezinqabileyo ezihlala ngokukhuselekileyo. Usasazeke kuNxweme lwase-East Yorkshire zininzi iilali ezinqabileyo ezineevenkile kunye neendawo zokuhlala zininzi. Ukuqhuba iimayile ezingama-20 kukuzisa kwiPaki yeSizwe yeMoors yaseNorth York, kunye nelali yaseGoathland, eyaziwa ngcono njenge-Aidensfield (ilali yeHeartbeat kakhulu). Izindlu ezinembali ezikufutshane ziquka iSledmere House kunye neBurton Agnes Hall. IBridlington eneelwandle ezinesanti, indawo eyonwabisayo kunye nedama lokuqubha langaphakathi yimizuzu eli-10 yokuqhuba. I-Scarborough enemidlalo yeqonga, iiresityu, iivenkile kunye nonxweme olunesanti luhambo lwemizuzu engama-20. Ukuhamba ngeponi kunye negalufa ekuhlaleni. Iiklasi zobugcisa zifumaneka ngeendleko ezongezelelweyo. Ulwandle 2 imayile. Ivenkile, i-pub kunye nevenkile yokutyela iiyadi ezingama-500.
I-Rockville Cottage (ref 24376) ingabhukishwa kunye neCopper House (ref 18435), iMilking Parlour (ref 18439), Shyre Stables (ref 18437) kunye neRockville Lodge (ref UK2503) ukuhlalisa ukuya kwiindwendwe ezili-18.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-2 181 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Izimvo eziyi-2 181
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bempton, near Flamborough